ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ ပထမဆုံးအတူနေတဲ့အချိန် သတိထားရမယ့်အချက်များ - 9+ Myanmar Login Registrieren မူလနေရာ နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်များ အဆန်းများ မော်လ်ဒယ်များ အားလုံးကြည့်ရန် သုတအထွေအထွေ Videos Photos ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ ပထမဆုံးအတူနေတဲ့အချိန် သတိထားရမယ့်အချက်များ 9mpro
186 Ansichten00 Wie Add to
Aktie Short Link Einbetten 550x350
ပထမဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုလို့ဆိုပေမယ့် ကိုယ့်ကျန်းမာရေးအတွက် မှန်ကန်တဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုကို ပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက် သတိထားရမယ့်အချက်တွေ တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးအကြိမ် လိင်ဆက်ဆံမှုပြုလုပ်ရာမှာ တော်တော်များများက ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ပဲ ဖြစ်တတ်ကြတဲ့အတွက် အကာအကွယ်ပစ္စည်းတွေအသုံးပြုဖို့ မေ့လျော့တတ်ကြပါတယ်။ လိင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ရောဂါတွေအပြင် ကိုယ်ဝန်ကိုလည်း တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက် ကွန်ဒုံးအသုံးပြုဖို့ကိုတော့ ပထမဦးဆုံး လိင်ဆက်ဆံမှုအရွယ်မှာဖြစ်စေ၊ အခြားမည်သည့်အချိန်မှာဖြစ်စေ လိင်ဆက်ဆံတိုင်း ကွန်ဒုံးသုံးဖို့ မမေ့ဖို့ အထူးတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ ကွန်ဒုံးအသုံးပြုဖို့ကို သင့်လိင်ဆက်ဆံဖက်က ငြင်းဆန်နေမယ်ဆိုရင်တော့ လိင်ဆက်ဆံဖို့ကို သင့်အနေနဲ့လည်း လိုက်လျောမှုမပြုလုပ်ပါနဲ့တော့။ ကိုယ့်ကို နားလည်မှုပေးနိုင်တဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှုကို စိတ်ချလုံခြုံစွာ ဆက်ဆံမှုပြုနိုင်တဲ့ လူတစ်ဦးနဲ့ပဲ လိင်ဆက်ဆံမှုကို ပြုသင့်ပါတယ်။တကယ်လို့သင်ဟာသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးလိင်ဆက်ဆံဖော်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်
ဘယ်သူမှတော့ ခံစားချက်ဆိုးရွားတဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှုကို ဖြစ်စေချင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်လို့ သင်ရော၊ သင့်ချစ်သူရောဟာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် လိင်ဆက်ဆံမှုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ သင်တို့နှစ်ယောက်စလုံး အကောင်းဆုံး လိင်ဆက်ဆံမှုဖြစ်ဖို့ကတော့ ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။
ဒါကတော့ မိန်းကလေးတော်တော်များများဖြစ်တတ်ကြတဲ့ ကိစ္စပါ။ ဒါပေမယ့် ပထမဦးဆုံးလိင်ဆက်ဆံတဲ့ကိစ္စမှာ ကိုယ့်ရဲ့ ဆက်ဆံဖော်အမျိုးသားကို ကာမရမ္မက်ပိုမိုထက်သန်စေပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှုဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ကပဲ စပြီးသူ့အင်္ကျီကိုချွတ်ပေးလိုက်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
လှတော့လှပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆွဲဆောင်အားတော့ မရှိပါဘူး။ သင့်ရဲ့လိင်ဆက်ဆံဖက်အနေနဲ့ကတော့ အရသာမရှိတဲ့ ကိတ်မုန့်တစ်လုံးကို စားနေရသလိုမျိုး ခံစားရလိမ့်မယ်ဆိုတာ အသေအချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီလိုအောက်ခံဘောင်းဘီမျိုးဝတ်မယ့် အစား အခြားဆွဲဆောင်အားရှိတဲ့ အောက်ခံဘောင်းဘီမျိုးကို ရွေးချယ်ဝတ်သင့်ပါတယ်။
၅။ အကြိမ်အရေအတွက်နဲ့ ချစ်သူနှစ်ဦးကြားဆက်ဆံရေး
၉ ကြိမ်မြောက်တွေ့ဆုံချိန်ကျမှ လိင်ဆက်ဆံမှုပြုလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ အတော်အသင့် ဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အဲဒီအချိန်မှာတော့ တစ်ယောက် အကြောင်း တစ်ယောက် အနည်းငယ်သိပြီးသားဖြစ်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့နားလည်မှုရှိပြီးသား ဆက်ဆံရေးတစ်ခုပိုမိုခိုင်မြဲသွားပြီလို့ သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။
Source : MODA
ဖုန်းထဲကနေ update အမြဲကြည့်ချင်ရင် ဒီမှာ Apk ဒေါင်းပြီး install လုပ်ထားလိုက်ပါ။ Veröffentlicht5months ago Kategorie Bild / သုတအထွေအထွေ
Mehr anzeigen Kommentare0Kommentare Next Media ကြောက်တတ်သူများလုံးဝမကြည့်ပါနဲ့5months ago 10:48
ကြောက်တတ်သူများလုံးဝမကြည့်ပါနဲ့00	178 Ansichten Ähnliche Medien ဘယ်လိုပုံက ဘယ်လိုရှိတယ် အပြည့်အစုံသိရအောင် နှိပ်ကြည့်လိုက်နော်..။
5 months ago5months ago ဘယ်လိုပုံက ဘယ်လိုရှိတယ် အပြည့်အစုံသိရအောင် နှိပ်ကြည့်လိုက်နော်..။
0 0	345 Ansichten ယောက်ျားပီသကြစမ်းပါ.. ကိုကိုတို့ရယ်..။ (နှိပ်ကြည့်လိုက်နော်..)
5 months ago5months ago ယောက်ျားပီသကြစမ်းပါ.. ကိုကိုတို့ရယ်..။ (နှိပ်ကြည့်လိုက်နော်..)
0 0	284 Ansichten အိမ်သာထဲထိ ဖုန်းယူသွားတတ်သူတွေ ဘယ်လောက် ကြောက်စရာကောင်းလဲ နှိပ်ကြည့်လိုက်
0 0	384 Ansichten ယခုအပါတ်အတွင်း ဖြစ်မယ်တဲ့နော်..။
5 months ago5months ago ယခုအပါတ်အတွင်း ဖြစ်မယ်တဲ့နော်..။
0 0	564 Ansichten ဖူးစငုံစ ပန်းလေးများ အခူးခံရလျှင် ( ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် အိမ်ထောင်ပြုလျှင်)
5 months ago5months ago ဖူးစငုံစ ပန်းလေးများ အခူးခံရလျှင် ( ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် အိမ်ထောင်ပြုလျှင်)
0 0	242 Ansichten " အိုးဋီကာ "(ရေးသားချက် 9+ ကျော်တယ်
5 months ago5months ago " အိုးဋီကာ "(ရေးသားချက် 9+ ကျော်တယ်
4,684 Ansichten KTV မှာလုပ်တဲ့ မမတစ်ယောက်ရဲ့ မရှက်တမ်းပြောထားတဲ့ ရင်ဖွင့်စကားများ
5 months ago5months ago KTV မှာလုပ်တဲ့ မမတစ်ယောက်ရဲ့ မရှက်တမ်းပြောထားတဲ့ ရင်ဖွင့်စကားများ
0 0	319 Ansichten သင်ယူမယ့်မိန်းကလေးက ဒီလိုမိန်းကလေးဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် သေချာစဉ်းစားဖို့ လိုအပ်တယ်နော်
0 0	153 Ansichten မိန်းမတွေရဲ့ စိတ်ကို ဖောက်ထွင်း ခန့်မှန်းကြည့်တတ်ချင်ပါသလား..? (နှိပ်ကြည့်လိုက်..)
5 months ago5months ago မိန်းမတွေရဲ့ စိတ်ကို ဖောက်ထွင်း ခန့်မှန်းကြည့်တတ်ချင်ပါသလား..? (နှိပ်ကြည့်လိုက်..)
0 0	319 Ansichten သိပ်ချော သိပ်လှတဲ့ နှင်းပွင့်ဖြူ အကြောင်း။5months ago5months ago သိပ်ချော သိပ်လှတဲ့ နှင်းပွင့်ဖြူ အကြောင်း။00	309 Ansichten Mehr von diesem Benutzer အပေးကောင်းလွန်းတဲ့ဆော်လေးနဲ့ အယူကြမ်းလွန်းတဲ့ ကိုကိုတို့တွေ့ကြသောအခါ
0 0	Durch 9mpro
703 Ansichten သင်ယူမယ့်မိန်းကလေးက ဒီလိုမိန်းကလေးဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် သေချာစဉ်းစားဖို့ လိုအပ်တယ်နော်
153 Ansichten ဒီလိုတွေ ဖြစ်နေမှ လုံးဝ အပျိုစစ်တာနော်..၁၈နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့ ကိုကိုတွေ နှိပ်ကြည့်လိုက်..
398 Ansichten ကလေးငယ်လေးတွေရှိသေးတယ် ဖောက်ပြန်နေကြပြီ
728 Ansichten နှစ်သစ်ကူးညနဲ့ တည်းခိုခန်းပေါ်ကမမချော
620 Ansichten Please contact us at info@chatwing.com if you cant embed the chatbox
9+ Myanmar © 2017 Alle Rechte vorbehalten. Zuhause Language EnglishEspañolFrançaisDeutsch Einloggen mit Facebook Einloggen mit Twitter Einloggen mit Google Benutzername oder E-Mail Kennwort Login Registrieren